विश्वकप फुटबल : शुक्रबार बहुप्रतिक्षित टिम स्पेन र पोर्चुगल भिड्दै….::Digital News Paper
विश्वकप फुटबल : शुक्रबार बहुप्रतिक्षित टिम स्पेन र पोर्चुगल भिड्दै….
विश्वकप फुटबलमा शुक्रबार बहुप्रतिक्षित टिमहरु स्पेन र पोर्चुगल भिड्दै छन् । समुह बी को खेलमा यी दुई टोलीले पहिलो खेल खेल्न लागेका हुन् । खेल शुक्रबार राति ८ः४५ बजे सुरु हुनेछ ।
अहिले व्यवस्थापनको हिसाबमा स्पेन केही समस्यामा रहेको देखिएको छ । स्पेनले प्रशिक्षक बर्खास्त गरेपछि भने व्यवस्थापकीय हिसाबमा स्पेन केही कमजोर बन्न पुगेको छ । स्पेनको टोलीमा विश्वकप सुरु हुनुभन्दा एक दिनअघि मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा स्पेनको टोलीमा देखिएको समस्याले नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने देखिन्छ ।
प्राविधिक हिसाबमा अहिले स्पेन निकै बलियो अवस्थामा रहेको छ । रियाल मड्रिड र बार्सिलोनाको मिडफिल्डले स्पेनको टोलीलाई थप बल प्रदान गरेको छ । यद्यपि पछिल्लो समय स्पेनको टोली केही कमजोर भने देखिएको छ । सन् २००८ र २०१२ को युरो विजेता टोलीले सन् २०१० को विश्वकप जितेको थियो ।
यो टोलीको डिफेन्स पनि निकै राम्रो छ । विश्वकपको वार्म अपको खेलमा पनि यो टोलीले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । साथै विश्वकपअघिका २० खेलहरुमा स्पेनले हारेको छैन ।
त्यसैले टोलीका नयाँ प्रशिक्षकलाई यो विश्वकपमा टोलीलाई आठ वर्षपछि उपाधि जिताउने मौका हुनेछ । यो टोलीको लागि गोलकिपर डेभिड गिया, रामोस, इनिस्टा, सिल्भाजस्ता खेलाडीहरुको साथ निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
पछिल्लो १० खेलमा यो टोलीले ३२ गोल गरिसकेको छ । जसले स्पेनलाई यो खेलमा समस्यामा पार्नसक्छ । यो टोलीका लागि रोनाल्डो, पेपे, ग्युरेरियोजस्ता खेलाडीहरुको प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहनसक्छ ।
हेड हु हेड
यी दुई टोलीहरु अहिलेसम्म ३६ पटक भिडेका छन् । जसमा स्पेनले आधा अर्थात् १८ खेलहरु जितेको छ भने केवल छ खेलहरु हारेको छ । सन् १९५० यता भएको १६ खेलमा पोर्चुगलले पाँच खेल जितेको छ भने सात खेल बराबरीमा सकिएको छ ।
सन् २०१२ को युरोमा पनि यी दुई टोलीहरु एकापसमा भिडेका थिए । सो खेल पेनाल्टी सुटआउटमा स्पेनले जितेको थियो । विश्वकपमा भने यी टोलीहरु एकपटक मात्र भिडेका छन् । सन् २०१० को विश्वकपको अन्तिम १६ मा भएको खेलमा स्पेनले डेभिड भिल्लाको गोलको सहयोगमा पोर्चुगललाई हराएको थियो ।